Akụkọ - Ọnụọgụ ọnụọgụgụ ụwa niile kachasị ọhụrụ
Ọnụ ọgụgụ: nde 140.76
Mexico bụ mba gọọmentị etiti na North America, nke ise n'ọkwa America na nke iri na anọ n'ụwa. Ọ bụ obodo nke iri kachasị n'ọnụ ọgụgụ n'ụwa na mba nke abụọ kachasị nwee na Latin America. Onu ogugu ndi mmadu di iche na obodo Mexico. Federal District nke Mexico City nwere nkezi ndị bi na 6347.2 ndị mmadụ na square kilomita; na-esote Steeti Mexico, na nkezi ọnụ ọgụgụ ndị bi na 359.1 mmadụ kwa square kilomita. Na ndị bi na Mexico, ihe dịka 90% nke agbụrụ Indo-Europe, yana ihe dịka 10% nke agbụrụ India. Ọnụ ọgụgụ ndị mepere emepe na-akpata 75% na ndị bi n’ime ime obodo 25%. E mere atụmatụ na ka ọ na-erule 2050, ọnụ ọgụgụ ndị bi na Mexico ga-eru 150,837,517.
Ọnụ ọgụgụ: 143.96 nde
Dị ka obodo kachasị ukwuu n'ụwa, ọnụ ọgụgụ ndị Russia enweghị ike ịmakọ ya. I ghaghi ima na onu ogugu ndi mmadu nke Russia bu 8 mmadu / km2, ebe China bu 146 mmadu / km2, India bu ndi 412 / km2. N'iji ya tụnyere mba ndị ọzọ buru ibu, aha ndị Russia na-ebughi ibu kwesịrị aha ahụ. Nkesa nke ndị Russia enweghị oke nkwekọ. Imirikiti ndị bi na Russia na-etinye uche na mpaghara Europe, nke na-akpata naanị 23% nke mpaghara mba ahụ. Banyere oke ọhịa dị na North Siberia, n'ihi ihu igwe dị oke oyi, ha enweghị ike ịbanye ma ọ fọrọ nke nta ka ha ghara ibi.
Ọnụ ọgụgụ: 163.37 nde
Bangladesh, mba dị n’Ebe Ndịda Eshia nke anyị na-adịghị ahụkebe n’akụkọ, dị n’ebe ugwu nke Bay Bengal. Otu obere mpaghara ndịda-ọwụwa anyanwụ ugwu gbara nso na Myanmar na ọwụwa anyanwụ, ọdịda anyanwụ na ugwu India. Obodo a nwere mpaghara pere mpe, naanị square kilomita 147,500, nke bụ otu ihe dị ka Province Anhui, nke nwere mpaghara nke square kilomita 140,000. Kaosinadị, ọ nwere ndị nke asaa kachasị elu n’ụwa, ma ọ dị mkpa ịmara na ọnụ ọgụgụ ya karịrị okpukpu abụọ nke mpaghara Anhui. A na-ekwukarị okwu ikwubiga okwu ókè: Mgbe ị gara Bangladesh ma guzoro n'okporo ámá nke isi obodo Dhaka ma ọ bụ obodo ọ bụla, ị gaghị ahụ ọ bụla ebe mara mma. Enwere ndị mmadụ ebe niile, ndị mmadụ juru eju.
Ọnụ ọgụgụ: 195.88 nde
Nigeria bu obodo kacha onu ogugu n'Afrika, onu ogugu ndi mmadu ruru nde 201, nke ruru 16% nke onu ogugu Afrika. Agbanyeghị, n'ihe metụtara ala, Nigeria nwere 31st n'ụwa. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere Russia, nke kachasị ukwuu n’ụwa, Nigeria bụ naanị 5% n’ime ya. N’ebe na-erughị otu nde square kilomita nke ala, ọ nwere ike inye nri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 200, na ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya ruru mmadụ 212 kwa kilomita kilomita. Naịjirịa nwere agbụrụ karịrị narị abụọ na iri ise (250), nke kachasị bụ Fulani, Yoruba na Igbo. Agbụrụ atọ ahụ nwere 29%, 21%, na 18% nke ndị bi na ya.
Ọnụ ọgụgụ: 20.81 nde
Pakistan bụ otu n'ime mba nwere ọnụ ọgụgụ ndị kachasị ọsọ n'ụwa. Na 1950, ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya bụ naanị nde 33, nke iri na anọ n'ụwa. Dabere na amụma ndị ọkachamara, ọ bụrụ na nkezi uto kwa afọ bụ 1.90%, ọnụọgụ ndị Pakistan ga-amụba okpukpu abụọ n'ime afọ 35 wee bụrụ mba nke atọ kachasị n'ọnụ ọgụgụ ụwa. Pakistan na-emejuputa atumatu nhazi ezinụlọ. Dika onu ogugu si di, obodo iri di na ihe kariri otu nde, na obodo abuo ndi mmadu nwere ihe kariri nde iri. N'ihe gbasara nkesa mpaghara, 63.49% nke ndị bi na ime obodo na 36.51% nọ n'obodo.
Ọnụ ọgụgụ: 210.87 nde
Brazil bụ mba nwere ọnụọgụ na South America, nke nwere ọnụọgụ mmadụ 25 n’otu kilomita kilomita. N’afọ ndị na-adịbeghị anya, nsogbu nke ịka nká ji nke nta nke nta pụta ìhè. Ndị ọkachamara kwuru na ọnụ ọgụgụ ndị bi na Brazil nwere ike ịdaba na nde 228 ka ọ na-erule 2060. Dị ka nyocha ahụ si kwuo, nkezi nke afọ ụmụ nwanyị na-amụ nwa na Brazil bụ 27.2 afọ, nke ga-arị elu ruo 28.8 afọ 2060. Dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, ọnụ ọgụgụ dị ugbu a nke mbuba agbụrụ na Brazil eruola nde 86, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara. N’etiti ha, 47.3% bụ ndị ọcha, 43.1% bụ agbụrụ agwakọtara, 7.6% bụ ndị ojii, 2.1% bụ ndị Eshia, ndị ọzọ bụ ndị India na agbụrụ ndị ọzọ na-acha odo odo. Ihe omume a nwere njikọ chiri anya na akụkọ ntolite ya na ọdịbendị ya.
Ọnụ ọgụgụ: 266.79 nde
Indonesia dị na Asia ma ọ bụ ihe dị ka agwaetiti 17,508. Ọ bụ mba kachasị ukwuu n'ụwa, na ókèala ya gbasara Asia na Oceania. Naanị na Island Island, agwaetiti nke ise kachasị na Indonesia, ọkara nke ndị bi na mba ahụ bi. N'ihe gbasara ala, Indonesia nwere ihe dịka square kilomita 1.91, nke ji okpukpu ise karịa nke Japan, mana ọnụnọ Indonesia adịchaghị elu. E nwere ihe dị ka agbụrụ 300 na asụsụ na olumba 742 n’Indoneshia. Ihe dị ka 99% nke ndị bi na ya bụ agbụrụ Mongolian (agbụrụ edo edo), na ọnụọgụgụ pere mpe nke agbụrụ agba aja. A na-ekesa ha n'ofe akụkụ ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ. Indonesia bu kwa obodo nke nwere onu ogugu ndi China.
Ọnụ ọgụgụ: nde 327.77
Dabere na nsonaazụ ndị US, site na Eprel 1, 2020, ndị bi na United States bụ nde 331.5, mmụba nke 7.4% ma e jiri ya tụnyere 2010. Mba na agbụrụ na United States dị iche iche. N'ime ha, ndị ọcha na-abụghị ndị Hispaniki ruru 60.1%, ndị Hispanik nwetara 18.5%, ndị Africa America na-aza 13.4%, ndị Eshia wee nweta 5.9%. Ọnụ ọgụgụ ndị US na-ewu ewu nke ukwuu n'otu oge ahụ. Na 2008, ihe dịka 82% nke ndị bi na obodo na ala ịta ahịhịa ya. N'otu oge ahụ, enwere ọtụtụ ala na-ebighi na US Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị bi na United States dị na ndịda ọdịda anyanwụ. California ne Texas a ɛwɔ akyirikyiri no, na New York City yɛ nkuraa a atew ne ho wɔ United States no ase.
Ọnụ ọgụgụ: 135,405 nde
India bu mba nke abuo kacha nwe onu mmadu n’uwa na otu n’ime obodo BRIC. Akụ na ụba na ụlọ ọrụ dị iche iche nke India dị iche iche, na-ekpuchi ọrụ ugbo, ọrụ aka, textiles na ọbụna ụlọ ọrụ ọrụ. Agbanyeghị, ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị bi na India ka na-adabere n'ụzọ nkịtị ma ọ bụ n'ụzọ na-arụ ọrụ ugbo maka ndụ ha. A na - akọ na nkezi uto India na 2020 bụ 0.99%, nke bụ oge mbụ India gbadara n'okpuru 1% n'ime ọgbọ atọ. Kemgbe afọ ndị 1950, nkezi ọnụego India bụ naanị nke abụọ na China. Na mgbakwunye, India nwere obere mmekọ nwoke na nwanyị nke ụmụaka kemgbe enwere onwe ha, yana ọkwa agụmakwụkwọ ụmụaka pere mpe. Ihe kariri umuaka 375 nwere nsogbu ogologo oge dika nsogbu di egwu na oria ojoo n'ihi oria ojoo.
Ọnụ ọgụgụ: 141178 nde
Dika nchoputa nke onu ogugu nke asaa nke obodo, ngụkọta nke mba a bụ 141.78 nde, mmụba nke 72.06 nde ma e jiri ya tụnyere 2010, na ọnụego uto nke 5.38%; nkezi afọ uto ọ bụla bụ 0,53%, nke dị elu karịa mmụba kwa afọ site na 2000 ruo 2010. Onu ogugu onu ogugu bu 0.57%, mbelata nke 0.04 percent. Agbanyeghị, n'oge a, ọnụ ọgụgụ mba m agbanwebeghị, ọnụ ahịa ndị ọrụ na-arị elu, usoro ịka nká na-arịwanye elu. Nsogbu nke onu ogugu ndi mmadu ka bu otu isi okwu na-egbochi mmepe aku na uba na mmepe nke China.